Daahyada La Tuuri Karo Isbitaalka, Daawooyinka La Tuuri Karo - Tianfeng
Suzhou Tianfeng Qalabka Deegaanka, oo la aasaasay 2008, waa shirkad dhammaystiran
daahyo isbitaal oo tayo sare leh oo la tuuro oo leh awood cilmi baaris iyo horumarin, qaabeyn iyo wax soo saar.
Alaabtayada waxaa ka mid ah daahyada caadiga ah ee la tuuri karo, daahyada mesh iyo daahyada daabacan.
daah waxaa laga sameeyaa 100% polypropylene kaas oo leh mid ka mid ah saameynta ugu hooseeya ee deegaanka ee shey kasta - synthetic or convertional.
Daahyada carruurta ee la tuuri karo
Daahyadayada la tuuri karo waxay sare u qaadayaan habka ay cosbitaalada u maareeyaan nadaafadooda iyo muuqaalkooda.
Dahaarka daahyada la tuuri karo
Suzhou Tianfeng Deegaanka Qalabka Qalabka Teknolojiyada, oo la aasaasay 2008, waa shirkad dhammaystiran oo ku takhasustay daahyo isbitaal oo tayo sare leh oo leh awood cilmi baaris iyo horumarin, qaabeyn iyo wax soo saar ah. Dhammaantood waxay leeyihiin qabsatooyin iyo calaamadda kuleylka oo ku lifaaqan.
Daahfuradeenna jiilka cusub ee la tuuri karo ayaa loogu talagalay inay ku beddelaan daahyada jira ee dib loo isticmaali karo iyo kuwa la dhaqi karo iyadoo la adeegsanayo keyd qiimo badan iyo xakameynta infekshinka oo hagaagay.
Waxaan nahay hogaamiye takhasus ku leh xakamaynta infekshinka, soosaarida bakteeriyada iyo ololka-daahfurka daahyada la tuuro.
13+ sano oo khibrad soosaarid daahyada cubicle ee la tuuri karo
Loo muujiyey inuu buuxiyo heerarka caalamiga ah ee bakteeriyada ka hortaga iyo ololka
Kaydinta qiimaha qaaliga ah iyo hagaajinta xakamaynta cudurka
Khadka madax-bannaan ee wax soo saarka bakteeriyada
Waxaa laga sameeyay 100% polypropylene dhar aan tolmo lahayn
Shaqaalaha Daryeelka Caafimaadka ee ay waxyeeleeyeen COVID Dagaal loogu talagalay Macaashka Magdhawga
Illaa iyo hadda, shaqaaluhu waxay ku qasbanaadeen inay si qancsan u caddeeyaan inay cudurka ku qaadeen shaqada. Laakiin 16 gobol ayaa hadda ka fiirsanaya inay cusbitaalka saaraan: Ka dhig mid caddeeya in shaqaaluhu aanu cudurka ku qaadin shaqada. Mid ka mid ah walxaha badan ee sameeya cudurka coronavirus 2019 (COVID-19) ...
Hay'adda Ilaalinta Deegaanka (EPA) ayaa ogolaatay Lysol Disinfectant Spray si loola dagaallamo SARS-CoV-2, oo ah fayraska sababa cudurka coronavirus 2019 (COVID-19). Hay'adda Ilaalinta Deegaanka (EPA) ayaa ogolaatay Lysol Disinfectant Spray si loola dagaallamo SARS-CoV-2, oo ah fayraska sababa coronavirus ...
Xarumaha Xannaaneynta Xirfadaha Waxay Ku Sii Nool Yihiin COVID-19
Waxaa jira baahi aad u ba'an oo lagu shubo SNFs ilo dheeraad ah, ma aha oo keliya qalabka difaaca shakhsi ahaaneed, laakiin sidoo kale ilaha kahortagga infekshinka iyo shaqaalaha. Tan iyo bilowgii cudurka SARS-CoV-2 / COVID-19 ee safka faafa ee Mareykanka, waxaan si weyn u ogaanay u nuglaanta ...